Solskjaer Oo Ka Jawaabay Eedaymo Uga Yimid Gary Neville, Roy – Axadle
Solskjaer Oo Ka Jawaabay Eedaymo Uga Yimid Gary Neville, Roy
Ole Gunnar Solskjaer ayaa si weyn u difaacay siyaasadda suuqa ee kooxdiisa Manchester United oo maamulka kooxda lagu canaananayo sida ay uga gaabinayaan inay ciyaartooyo lasoo wareegaan.
Halyeeyadii hore ee Manchester United ee Gary Neville, Roy Keane, Patrice Evra iyo kuwo kale ayaa ku eedeeyey Red Devils inay ku fashilan tahay suuqa oo awoodda ciyaartoyda ay haystaanna aanay gaadhsiisnayn heer ay kula tartami karayaan horyaalka naadiyada Liverpoo, Man City iyo kooxaha kale ee sameeyey saxeexyada ay isku xoojiyeen.
Donny van de Beek oo kaliya ayay Manchester United lasoo saxeexatay intii uu furnaa suuqa iibka ciyaartoydu, waxaanay waji gabax kala kulantay dhawr jeer oo ay dalabyo ka gudbisay Jadon Sancho, kaddib markii ay buuxin weyday shuruuddii dhinaca dhaqaalaha ee ay Borussia Dortmund ku xidhay oo ahaa inay miiska soo saaraan £108 milyan oo Gini.
Ole Gunnar Solskjaer oo waraysi siinayay Sky Sports ayaa yidhi: “Markii aan imid ee shaqadan la isiiyey, waxa aan aragtidayda ka dhiibtay sida ay kooxdani u ekaan doonto iyo sida ay ku gaadhaysaba. Waxa aan dareemay in markii aanu wada-hadalnaynay, in kooxdu fahamtay aragtidaydii.
“Haddii aan si daacad ah u hadlo, natiijooyinka ayaa mar walba fure ka ah halkan, laakiin kooxdu waxa kale oo ay arkaysaa waxa aanu qabanayno koox ahaan iyo waxa aanu doonayno inaanu samayno koox ahaan.
“Anigu ma eegayo waxa kooxaha kale sameeyeen, kaliya waxa aan ka fiirinayaa sida ay usii wadayaan waxa ay qabanayaan laakiin kooxaha kale waxay leeyihiin qaab loo maamulo, annaguna waxaanu koox ahaan leenahay qaab aanu isku maamulno.
“Dabcan waxaan aad ugu faraxsanahay ciyaartoyda aan haysto. Laakiin sidoo kale, waxa shaqada qayb ka ah inaanu kooxda horumarino waqti kasta, illaa haddana waxa aan dareemayaa inaanu haysano taageerada maamulka. Si adag ayaanu u shaqaynaynaa si aanu mar kale u noqoto kuwo tartamaya, kuwa ugu wanaagsanna uga mid ahaano.
Ole Gunnar Solskjaer waxa uu ku dooday in kubadda cagta uu isbeddel ku dhacay, waxaanu yidhi: “Waxay ila tahay in kubadda cagta uu isbeddel ku dhacay lixdii ama siddeeddii bilood ee tegay, waqtiyadanna waxay ahaayeen kuwo gaar ah. Si aad heshiisyo u dhamaystirto, waxa aad u baahan tahay inaad ciyaartoyda dusha kala socoto muddo aad u dheer, aad kormeerto bartilmaameedkaaga, waxa aanan dareemayaa in hannaankaasi uu si fiican u shaqaynayay.”